UMichael Skakel wayenokuba nayo yonke into-ubutyebi, ukhuseleko, abahlobo kwiindawo eziphakamileyo, kodwa into ehamba kakubi kakhulu. Ukuba ngumntakwabo kwindlu kaKennedy akuphumelelanga ukumkhusela kuye kunye neengxaki zikaMichael zakuqala. Kwisiphakamiso sezemihla ngemihla yokuba wayezama ukuthengisa kumvakalisi, uSkakel wachaza ukufutheka kwakhe, ukukhubazeka kwakhe ukufunda, utywala kunye nomona wabantwana. Kwiminyaka engamashumi amabini anesixhenxe emva koko, ijaji yagqiba ukuba iidemon zakhe zamkhokelela kumbludgeon uMarg Moxley oneminyaka eli-15 ubudala ukuba afe kunye neqela legalufa.
UMichael Skakel wazalwa ngo-Oktobha 19, 1960 ukuya eRushton no-Anne Skakel. Wayengunyana ophakathi kwabazalwana abathandathu waza wakhulela kwikhaya elikhulu kwiindawo ezicebileyo zaseHain Haven eGreenwich, Conn. URushton Skakel Sr., umzalwana kaEthel Skakel Kennedy, owayesatshatile ekupheleni kukaRobert F. Kennedy , wayengusihlalo we-Great Lakes Carbon Corp. I-Skakels yayiyingxenye yabantu baseMelika, banandipha indawo ekhethekileyo kuluntu, ubutyebi kunye nekhaya kwelinye leedolophu ezicebile kakhulu e-US.
Ngo-1973 u-Anne Skakel wasweleka ngumhlaza. UMichael wayeneminyaka eli-12 ubudala waza wabhujiswa ngokulahlekelwa ngumama. U-Anne wayeyinxalenye ebalulekileyo yobomi bakhe kwaye uMichael wazibeka ngokufa kwakhe, ebonisa ingqalelo yakhe embi kwimithandazo yakhe njengesizathu. Ibhalansi elaligcinwe ngu-Anne ngaphakathi kwindlu yaseSkakel yayiphelile kwaye uhlobo lwabazalwana bentakwa. URushton Skakel wachithe ixesha elide emsebenzini, eshiya abantwana okanye abaqeqeshi abaqeshiweyo okanye abahlala kwiindawo zokuhlala.
Isikolo samaMichael esibuhlungu:
UMichael wayengumfundi onyantyikisayo, enobunzima bokungaboni kakuhle. Uyise wayehlala emyala ngokuphucula izakhono zakhe zokufunda. Wayehluthwa kwizikolo ezininzi ezizimeleyo kwaye eneminyaka eyi-13 wayezichaza ngokwakhe, "utywala obunxilisayo rhoqo imihla ngemihla."
Njengomntwana, uMichael wayedume ngokuba nodlova kwaye ukhawuleza ukuphelelwa ngumsindo. Kwakhona wayeyaziwa ngokuhlambalaza nokubulala iintaka kunye nee-squirrels aze azibonakalise ngendlela ecwangcisekileyo. Ubushushu bakhe obukhawulezileyo kunye nemvelo ebuthathakayo yabangela ubudlelwane bakhe kunye nabantwana abahlala kunye nabantwana bahlala bengavumi ukuba abantwana babo badibanise ne-Skatel abafana abanenkululeko.
UTommy, umntakwabo kaMichael, wayedume kakhulu kwaye wayenendlela kunye namantombazana omakhelwane. Ngokutsho kwencwadi kaMark Furhman, Ukubulala eMreenwich kwakukho uxhaso oluqinileyo phakathi kwabazalwana ababini, kunye noTommy behlala bephuma phezulu. Oku kwakunzima kuMichael ukuba amkele xa efunyanwa ukuba atyelele kumantombazana athile kunye nomntakwabo.
Umbulali kaMarta Moxley:
Ngo-Oktobha 1975, uTommy noMichael baba ngamangqungquthela ekubulaweni kukaMarta Moxley oneminyaka eli-15, umhlobo nommelwane wabafana. "Ubusuku obubi" ngobusuku obungaphambi kweHalloween, kwaye uMartin Moxley kunye nabahlobo babephulaphuza i-cream shaving and rocking doorbells ngaphambi kokuba bayeke kwi-Skakels. UMarta washiya i-Skakels ekhaya phakathi kwe-9: 30 no-11: 00 ntambama kodwa akazange akwenze.
Ngolunye usuku umzimba wakhe onobunqunu wawufunyenwe phantsi komthi entendeni yakhe. Iingubo zakhe zahluthwa, kodwa akukho ubungqina bokuhlaselwa ngokwesondo. Isixhobo, i-club ye-golf yaseToney Penna ebiza kakhulu, yafunyanwa nge-shaft ephahliweyo, kunye neqhekeza layo elifakwe kwiNtamo kaMarta. Abaphandi babonisa iqela kwi-set of the boy's dead mother, u-Anne Skakel.
Oku kufumanisa ukubeka ingqwalasela ephambili kwikhaya le-Skakel. Emva kokuxoxwa ngabahlobo bakaMarta, kuquka i-Skakels, amapolisa agweba uMichael Skakel njengomsolwa ngenxa yokuba wayesekhaya lomhlobo ngexesha lokubulawa kukaMarta. UTommy Skakel kunye nomqeqeshi osanda kuqeshwa, uKen Littleton, owayehlala kwikhaya lase Skakel, wahlala enkundleni yoluhlu lwabasoli, kodwa akukho nto yabanjwa kuyo.
Ukuphuza kwansuku zonke kukaMichael kwathi ngo-1978 wabanjwa e-New York ukuba aqhube xa eqhuba. Ngokwesivumelwano kunye nombuso ukuhlawula iirhafu, uMichael wathunyelwa esikolweni sase-Elan ePoland Spring, eMaine apho waphathwa khona ngenxa yokusela utywala.
Ukumemeza okuPhezulu: I-Elan School inomxholo wolwaphulo lweqela kunye neeseshoni zangasese apho abafundi bakhuthazwa ukuba bathathe inxaxheba "ekumemeza ngokukhawuleza" baze bahlambuluke ngeziganeko ebomini babo obangela ukuba babe netyala kunye nentlungu. Kwakulo xesha e-Elan ukuba uMichael wayevuma ukuba uyise kunye namalungu abasebenzi base-Elan ukuba wayebandakanyeka ekubulaweni kukaMarley Moxley, (ingongoma ngoku iphikisiwe ngummeli wakhe).
Ubunzima: Emva kokuba uMichael eshiye u-Elan, waqhubeka elwa nokusela utywala, engena kwiindawo ezahlukeneyo zokulungisa. Ekuqaleni kweminyaka engama-20 ubudala, waqala ukuphila ubomi obuchukumisayo. Wafunyaniswa ukuba une-dyslexia kwaye wangena kwiCorry College eMassachusetts ejolise kubafundi abaneziphene zokufunda. Emva kokugqiba kwakhe wathatha umtshato waseGolf, uMargot Sheridan waza wachitha ixesha elide ekulungiselela kunye nokukhuphisana kwiindwendwe ezisejubaneni.
UWilliam Kennedy Smith: Ngomnyaka we-1991, uphenyo lweMoxley lwavulwa kwakhona emva kweendlebe ezazisasazwa ngexesha lokulingwa kukaWilliam Kennedy Smith, ukuba uWilliam wayesekhaya lase Skakel ngobusuku ebusuku uMoxley wabulawa. Icandelo lophandaba nalo linomdla kulo mba kwaye ezininzi zeenqununu zathethwa ngudliwano-ndlebe. Nangona iindaba zokubakho kukaSmith endlini zazingqina ubuxoki, isohlo loluntu laphinde lagxila kwi-Skakel boys, uTommy noMichael.
Isikhokelo soFundo lwePeriodic Table - Intshayelelo kunye neMbali
Isihlomelo sesi-14 Isishwankathelo
Amazwe oMlambo waseMazansi